जो बाईडेनले फ्लेरिडा ,ईलिनोई र एरिजोना तिन वटै राज्यमा जिते - Enepalese.com
जो बाईडेनले फ्लेरिडा ,ईलिनोई र एरिजोना तिन वटै राज्यमा जिते
इनेप्लिज २०७६ चैत ५ गते ११:०१ मा प्रकाशित
अमेरिकी राष्ट्रपतिको लागि प्राथमिक निर्वाचनको लागि डेमोक्रेटिकको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका पूर्व उप राष्ट्रपति जो बाईडेनले फ्लेरिडा ,ईलिनोई र एरिजोना समेतमा निर्वाचनमा जितेका छन ।
अमेरिकाको ५० वटै राज्यमा कोरोना भाईरसको संक्रमणको महामारीमा भएको मतदानमा जो बाइडेनले बाजी मारेका छन् । बाईडेनले गत हप्ता सम्पन्न महा मंगलवार( सुपर ट्युजडे) दोश्रोमा बाइडेनले ५ वटा राज्य आइडाहो ,मिसिसिपी ,मिसौरी ,मिसिगन र वाशिंगटनमा ऐतिहासिक बिजयी हासिल गरेका थिए ।
बाईडेनले फ्लेरिडामा ६१.९ प्रतिसत र बर्निले २२. प्रतिसत ,ईलिनोईमा ५९.४ प्रतिसत भने बर्निले ३५.७ प्रतिसत ,र एरिजोनामा बाइडेनले ४२.४ प्रतिसत र बर्निले २९. प्रतिसत मत ल्याएका छन ।
बाईडेनले ३ वटै राज्यमा डेमोक्रेटिक कै शसक्त भर्मन्टका सिनेटर बर्नी स्यान्डरलाई हराएका छन । कोरोना भाइरसको कारण १० जना भन्दा ज्यादा मानिसहरु भेला नहुनु भन्ने सुझाव सिडिसीले दिएको हुनाले बाइडेनले आफ्नै घरबाट दुई वटा राज्यको परिणाममा बिजयी हासिल गरे पछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत अमेरिकन जनता र मतदातालाई धन्यवाद दिए ।
उनले बोल्दै स्यान्डर्स ” कार्यनीतिमा असहमत हुन सक्छन्, तर हामी स्वास्थ्य हेरचाह, आय असमानता र जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयहरुमा साझा लक्ष्यलाई (शेयर)हिस्सा गर्दछौं।”भने । सिनेटर स्यानडर्स र उनका समर्थकहरूले यी सबै मुद्दाहरूको लागि उल्लेखनीय जोश र दृढता ल्याए र उनीहरूले सँगै यस मुलुकमा मौलिक कुराकानीलाई बदलेका छन्,” बाइडेनले भने।
“त्यसो भए मलाई विशेष गरी सिनेटर बर्नी द्वारा प्रेरणा भएका युवा मतदाताहरूलाई भन्न दिनुहोस्। म तपाईंलाई सुन्छु। मलाई के थाहा छ भन्ने मलाई थाहा छ। हामीले के गर्नु पर्छ ,मलाई थाहा छ। अभियानको रूपमा हाम्रो लक्ष्य र राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको रूपमा मेरो लक्ष्य। यो दललाई एकीकृत गर्नु हो, र त्यसपछि राष्ट्रलाई एकीकृत गर्नु हो ,भने ।
संकटको यस घडीमा हामी एक भएर खडा हुनु अत्यावश्यक छ,” स्यान्डर्सले भने । तीन वटै राज्यको परिणामले जो बाईडेनको बाटो खुलेको छ। संभवत बाईडेन डेमोक्रेटिक दलको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा मनोनयन हुनेछन र ट्रम्पसंग भिडन्त हुने छ ।
समाचार श्रोत : सिएनएन , तस्बिर : कमन ड्रिम्स